January 7, 2022 - Achawlaymyar
ပုန်းအောင်ပြီးနေထိုင်နေကြတဲ့ တကယ့်ချမ်းသားတဲ့ သူဋ္ဌေးကြီးတွေ
January 7, 2022 by Achawlaymyar
အချို့သောသူတွေကချမ်းသာကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဘဝကိုဖြစ်သလို၊အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းစျေးကြီးပေးဝယ် ရတဲ့ကားအကောင်းစားကြီးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်လေးတွေကတော့ပြင်ထောင်အိမ်လေးနဲ့ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ရုံနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအဆင့်မသတ်မှတ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုယခုဖော်ပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကသင်ခန်းစာပေးလိုက်သလိုပါပဲလေ။ Credit: Mia (Mckzone Daily) Zawgyi အချို့သောသူတွေကချမ်းသာကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဘဝကိုဖြစ်သလို၊အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဈေးကြီးပေးဝယ် ရတဲ့ကားအကောင်းစားကြီးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်လေးတွေကတော့ပြင်ထောင်အိမ်လေးနဲ့ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ရုံနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအဆင့်မသတ်မှတ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုယခုဖော်ပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကသင်ခန်းစာပေးလိုက်သလိုပါပဲလေ။ အချို့သောသူတွေကချမ်းသာကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဘဝကိုဖြစ်သလို၊အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းစျေးကြီးပေးဝယ် ရတဲ့ကားအကောင်းစားကြီးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်လေးတွေကတော့ပြင်ထောင်အိမ်လေးနဲ့ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ရုံနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအဆင့်မသတ်မှတ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုယခုဖော်ပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကသင်ခန်းစာပေးလိုက်သလိုပါပဲလေ။ Credit: Mia (Mckzone Daily) Zawgyi အချို့သောသူတွေကချမ်းသာကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဘဝကိုဖြစ်သလို၊အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဈေးကြီးပေးဝယ် ရတဲ့ကားအကောင်းစားကြီးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်လေးတွေကတော့ပြင်ထောင်အိမ်လေးနဲ့ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ရုံနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအဆင့်မသတ်မှတ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုယခုဖော်ပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကသင်ခန်းစာပေးလိုက်သလိုပါပဲလေ။ အချို့သောသူတွေကချမ်းသာကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဘဝကိုဖြစ်သလို၊အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းစျေးကြီးပေးဝယ် ရတဲ့ကားအကောင်းစားကြီးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်လေးတွေကတော့ပြင်ထောင်အိမ်လေးနဲ့ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ရုံနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအဆင့်မသတ်မှတ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုယခုဖော်ပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကသင်ခန်းစာပေးလိုက်သလိုပါပဲလေ။ Credit: Mia (Mckzone Daily) Zawgyi အချို့သောသူတွေကချမ်းသာကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဘဝကိုဖြစ်သလို၊အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဈေးကြီးပေးဝယ် ရတဲ့ကားအကောင်းစားကြီးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်လေးတွေကတော့ပြင်ထောင်အိမ်လေးနဲ့ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ရုံနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအဆင့်မသတ်မှတ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုယခုဖော်ပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကသင်ခန်းစာပေးလိုက်သလိုပါပဲလေ။ အချို့သောသူတွေကချမ်းသာကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းဘဝကိုဖြစ်သလို၊အဆင်ပြေသလိုနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းစျေးကြီးပေးဝယ် ရတဲ့ကားအကောင်းစားကြီးမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်လေးတွေကတော့ပြင်ထောင်အိမ်လေးနဲ့ စုတ်စုတ်ပြတ်ပြတ်နေနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အပြင်ပန်း … Read more
မြန်မာနိုင်ငံက ဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်သွားတဲ့ လှည်းပန်းတောင်းတွေ တရုတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါ…
မြန်မာနိုင်ငံက ဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်သွားတဲ့ လှည်းပန်းတောင်းတွေ တရုတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါ… အတုယူကြစေချင်ပါသည်။ကိုယ်တွေဆီမှာတော့ အမှိုက်ဆိုပြီး ရတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပေးလိုက်ကြတယ်။ (ဝယ်သူရှိလို့ ပျော်တောင်နေကြအုံးမယ်)တီထွင်ဖန်တီးတက်သူတွေ လက်ထဲရောက်သွားတော့ အမှိုက်ကနေရွှေဖြစ်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်က လှည်းပန်းတောင်းတွေ ဘာလုပ်ဖို့ ဝယ်နေကြတာလဲလို့ ရှာဖွေလိုက်တာ တွေ့သွားပါပြီ… မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဝယ်နေကြတာ အလွန်ဆုံးပေးရင် တစ်လုံးကို ၅၀၀၀ ပဲ…ပန်းပုထုထားတဲ့ ပုံထဲမှာပါတဲ့ တရုတ်ငွေဈေးအရ မြန်မာငွေ ၆သိန်းမှ ၁၄ သိန်းကျော် ရှိပါတယ်… လှည်းပတောင်းဆိုတာ နွားလှည်းရဲ့ ဘီးအလည်ဗဟိုမှာရှိတဲ့ လှည်းဝင်ရိုး တပ်ရတဲ့နေရာမှာရှိတာပါ.. လှည်းဘီးက ဒေါက်တွေကို လှည်းပတောင်းပတ်လည်မှာ စိုက်ပြီး အပြင်ပတ်လည်က သစ်သားဂွေနဲ့ ပတ်ပတ်လည်ဆက်လိုက်မှ လှည်းဘီးတစ်ခုဖြစ်လာတာပါ မြန်မာတောင်သူတွေရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကတော့ အများစုမှာ နွားတွေမရှိတော့ပါဘူး… လယ်ထွန် ကောက်စိုက်၊လယ်ရိတ် စတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ စက်တွေကို ငှားပြီး လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်….နွားမရှိတော့ ရှိတဲ့လှည်းတွေကလည်းအသုံးမဝင်တော့ပါဘူး…ပျက်ရင်လည်းမပြင်ကြတော့ပါဘူး..လှည်းတွေ ပျက်သွားတဲ့အခါ … Read more
pdf လေးတွေကားမှောက်တာလက်ရှိအခြေနေပါတဲ့.. PDFတွေရဲ့ဘဝဟာ တိုက်ပွဲတိုက်ရမှ မဟုတ်… လမ်းသွားရင်းလည်း အသက်အန္တာရာယ်ထိခိုက်နိင်တယ်… လက်နက်စမ်းသပ်ရင်းလည်း အသက်ပေးရနိင်တယ်…. ဒဏ်ရာရသူတွေကို အကောင်းဆုံးကုသပေးနေပါတယ်….3Cobra PDF ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး မြန်မြန်သက်သာပျောက်ကင်းကြပါစေ unicode pdf လေးတှကေားမှောကျတာလကျရှိအခွနေပေါတဲ့.. PDFတှရေဲ့ဘဝဟာ တိုကျပှဲတိုကျရမှ မဟုတျ… လမျးသှားရငျးလညျး အသကျအန်တာရာယျထိခိုကျနိငျတယျ… လကျနကျစမျးသပျရငျးလညျး အသကျပေးရနိငျတယျ…. ဒဏျရာရသူတှကေို အကောငျးဆုံးကုသပေးနပေါတယျ….3Cobra PDF ဆုတောငျးပေးကွပါအုံး မွနျမွနျသကျသာပြောကျကငျးကွပါစေ unicode pdf လေးတွေကားမှောက်တာလက်ရှိအခြေနေပါတဲ့.. PDFတွေရဲ့ဘဝဟာ တိုက်ပွဲတိုက်ရမှ မဟုတ်… လမ်းသွားရင်းလည်း အသက်အန္တာရာယ်ထိခိုက်နိင်တယ်… လက်နက်စမ်းသပ်ရင်းလည်း အသက်ပေးရနိင်တယ်…. ဒဏ်ရာရသူတွေကို အကောင်းဆုံးကုသပေးနေပါတယ်….3Cobra PDF ဆုတောင်းပေးကြပါအုံး မြန်မြန်သက်သာပျောက်ကင်းကြပါစေ unicode pdf လေးတှကေားမှောကျတာလကျရှိအခွနေပေါတဲ့.. PDFတှရေဲ့ဘဝဟာ တိုကျပှဲတိုကျရမှ … Read more
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို လာရောက်ဖြဆိုကြရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသော်လည်း ယနေ့အချိန်အထိ တစ်ဦးတယောက်မှလျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းသတ်မှတ်ရက် တိုးမြှင့်
တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ရက် တိုးမြှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့် လျှောက်လွှာများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့အတွင်း လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့က ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အားလုံး (ကျောင်းဖွင့်ရက်နောက်ကျသော တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် (၉)ခုမှ မြို့နယ် (၄၆)မြို့နယ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသော ဝေးလံဒေသများ အပါအဝင်)မှ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများ၊ကျောင်းခွဲများ၊ တွဲဖက်ကျောင်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်းများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများမှ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုကြမည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ပြင်ပဖြေဆိုမည့်သူများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အတွက် လျှောက်လွှာရောင်းချခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းတို့ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ … Read more
အင္တာနက္အျဖတ္ခံရတဲ့ ေနရာေတြမွာ ဒီအခ်က္ေတြလုပ္သင့္ပါတယ္
အင်တာနက် ဖြတ်ခံရတဲ့ဒေသတွေ တစ်နယ်လုံး ဖုန်းကတ်တစ်မျိုးတည်းသုံးပါ နောက် တစ်နယ်လုံးတူညီတဲ့ ဖုန်းကတ် တစ်မျိုး အရံထားပါ ဥပမာ အော်ရီဒူးတစ်မျိုးပဲ ဖုန်းခေါ် မက်ဆေ့ချ်ပို့လုပ်ပြီး ကျန်တဲ့ တယ်လီနောကို အော်ရီဒူးပျက်သွားရင်သုံးဖို့အရံထားပါ အွန်လိုင်း ရတဲ့ဒေသတွေကနေ အဲဒီဒေသတွေဆီကို အွန်လိုင်း ပေါ်ကနေ အရေးပါပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ သတင်းအကျဉ်းချုပ်တွေကို မက်ဆေ့ချ် နဲ့ပို့ပေးပါ အဲဒါကိုမှ အချင်းချင်း ပြန်ဖြန့်ကြပါ ဒီနေရာမှာ သတင်းအမှားအမှန် ခွဲခြားတတ်ဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ် ယုံကြည်ရတဲ့လူ ခိုင်လုံရတဲ့လူတွေဆီကရတဲ့သတင်းကိုပဲ ယူကြပါ အွန်လိုင်းရတဲ့လူတွေကလည်း သတိထားပြီး တိကျတာတွေပဲ ပို့ပေးကြပါ အင်တာနက် ပိတ်ခံရတဲ့အချိန်ဟာ ကောလဟာလ အထွက်ဆုံးအချိန်ပါ ဒါကြောင့် ဒီအချက် အရမ်းဂရုစိုက်ပါ တစ်ခါ အင်တာနက်မရတဲ့ ဒေသက ပြည်သူတွေကလည်း ဒေသတွင်းဖြစ်ပျက်မှုတွေကို ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေဆီကို ပို့ပေးပါ ဒါမှသာလျှင် … Read more
“ရေခဲထုပ်တွေအများကြီးထည့်ထားရင်ပစ်လဲနေလို့ နှစ်ခါခွဲရောင်းရတာပါသားရယ် တစ်နေ့ လုံးရောင်းမှ ၂၅၀၀ ဘဲ မြတ်တာပါ ဈေး မဆစ်ပါနဲ့နော်…” “ဒီ ၁၅ ထုပ်ကို သားအကုန်ယူမှာလေ နည်းနည်းတော့ လျော့ပေးပါဦး..” ” အဖွား တကယ်လျော့မရတော့လို့ပါ…” “ဟုတ်ကဲ့ပါ အဖွား…ဒီမှာ ပိုက်ဆံ…” “သား ပိုက်ဆံတွေက အများကြီးဘဲ…” “အဲ့ဒါ ၁၅၀၀ မဟုတ်ဖူးလား…” “မဟုတ်ပါဘူး… ဒါ ၅၀၀ တန် တွေလား..???..” “အဖွားသေချာလေးကြည့်ပါဦး…” “တစ်သောင်းတန်တွေ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10… ၁၀ရွက်တောင်..ဟီး…ရော့….””ဟာ..မဟုတ်ဘူးလေ အဖွားကို အကုန်လုံးကန်တော့တာ..” “တကယ်လားဝမ်းသာလိုက်တာ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရယ်…” “ဒါဆို ဒီရေခဲထုပ်တွေက …””သားစားရင် စား ၊ မစားရင် ဒီနားကလူတွေဝေလိုက်တော့လေ…” “ဟုတ်ပြီဗျာ…ကဲ ပျော်ရဲ့လား အဖွား…””ပျော်တာပေါ့ သားရယ်.. တစ်နေ့ လုံးရောင်းမှ ၂၅၀၀ လောက်ဘဲရတာလေအခုက တစ်သိန်းကြီးများတောင်ဆိုတော့အဖွားအရမ်းပျော်တာပေါ့..” … Read more
ချစ်ရတဲ့ သမီးငယ်လေးကို သူနဲ့အတူလွတ်မြောက်နယ်မြေထိ ခေါ်လာခဲ့သည့် သည်ခေတ်နေ
ချစ်ရတဲ့ သမီးငယ်လေးကို သူနဲ့အတူလွတ်မြောက်နယ်မြေထိ ခေါ်လာခဲ့သည့် သည်ခေတ်နေ ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ နာမည်တစ်ခုရနေပြီး အောင်မြင်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာကောင်းတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုလည်း ရိုက်ကူးထားပြီး အမှန်တရားအတွက်ဆိုရင်လည်း ရဲဝင့်စွာရပ်တည်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီက လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေကစပြီး ယခုအချိန်ထိ အမှန်တရားဘက်မှာသာ ပြည်သူနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ယခုမှာဆိုလည်း ၅၀၅(က) ကြိး အထုတ်ခံထားရလို့ လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ထွက်ပြေးတမ်းရှေင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ ဒါရိုက်တာ သည်ခေတ်နေက သူနဲ့အတူ လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့ သမီးလေးက တောသူမလေးတစ်ဦး ဖြစ်နေပြီး အမှန်တရားနဲ့ ချစ်‌ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းတွေကို သမီးလေးကိုပြောပြနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သည်ခေတ်နေက “သမီးလေးရေ… မဟုတ်တာလုပ်ရမှာနဲ့ မဟုတ်တာပြောရမှာ… လောကမှာ ကြောက်စရာဆိုလို့ အဲ့ဒီ၂ခုပဲရှိတယ်တဲ့။ မှန်တာပြော/မှန်တာလုပ်ပြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သာ ရှင်သန်ပါစေသမီးလေးရေ။ ခုတော့…ဖေဖေနဲ့ပေါင်းပြီး ကိုယ့်သမီးလေးလည်း … Read more
တခါတုန်းက ရွာကလေးတစ်ရွာမှာ ငှက်မုဆိုးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ သူက ငုံးငှက်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ထောင်ချောက်ဆင်ပြီး ဖမ်းတယ်။ဖမ်း မိတဲ့ငုံးတွေကို ချက်ချင်းမရောင်းသေးဘူး၊ အစာရေဆာကောင်းကောင်းကျွေးပြီး အိမ်မှာထားတယ်။ ငုံးငှက်တွေဆူဖြိုးဝဖီးလာပြီး ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းလှ၊ ဈေးကောင်းရတဲ့အချိန်မှ ထုတ်ရောင်းလေ့ရှိတယ်။တစ်နေ့မှာတော့ မုဆိုးဟာ တောထဲကနေ ငုံးတွေအမြောက်အများဖမ်းမိလာတယ်။သူက ဖမ်းမိလာတဲ့ ငုံးတွေအားလုံးကို လှောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီး လှောင်ထားလိုက်တယ်။ သူလုပ်နေကျအတိုင်း ရေနဲ့တကွ ဆန်၊ စပါး၊ ပြောင်းစေ့စတဲ့ အစာတွေကို စိတ်တိုင်းကျနိုင်အောင် ထည့်ပေးထားတယ်။ငုံးတွေဟာ တောထဲမှာ တောင်မစားရတဲ့ အစားကောင်း အသောက်ကောင်းတွေကို စိတ်တိုင်းကျ စားရတာကြောင့် အားပါးတရ စားကြတယ်။ အစာကို ဘယ်လောက်များခုံမင်တပ်မက်ကြသလဲဆိုရင် အချိန်မရွေးကျရောက်နိုင်ပြီး အလွန်နီးကပ်လာနေတဲ့ သေခြင်းတရားကိုတောင် မေ့လျော့နေကြတယ်၊ သတိလက် လွတ်ဖြစ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့..အဲဒီငုံးတွေထဲက တစ်ကောင်သော ငုံးငှက်ကတော့ သတိလက်လွတ်မဖြစ်ဘူး၊ မုဆိုးရဲ့ လှောင်အိမ်ထဲကနေ လွတ်မြောက်နိုင်မယ့် လမ်းစကိုပဲ စဉ်းစားတွေးတောနေတယ်။သူက ငုံးလာဝယ်တဲ့သူတွေဟာ … Read more
ေထာင္ထဲမွာေန႔စဥ္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ လုပ္ရတဲ့အလုပ္အေၾကာင္း
ေထာင္ထဲမွာေန႔စဥ္ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ လုပ္ရတဲ့အလုပ္အေၾကာင္း ေထာင္ထဲက အတူေန အခန္းေဖာ္ေျပာျပတဲ့ အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ အေၾကာင္း မအူဝဲေလာက္ေအးခ်မ္းတဲ့မင္းသမီး မေတြ႕ဖူးဘူးတဲ့ အမနဲ႔ပက္သက္ပီးစာေလးနဲနဲေလးေရးခ်င္လာတာရယ္ ဘဝတေကြ႕မွာ ႀကဳံခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဝမွာ အမေလာက္ေအးခ်မ္းတဲ့မင္းသမီးမ်ိဳးတကယ့္ကို မျမင္ခဲ့ဖူးဘူး ႐ူပါအထဲေရာက္ပီး ၂ ပတ္ေလာက္ေနေတာ့ အမတို႔ေရာက္လာခဲ့တယ္။ တစ္ခန္းထဲတူတူေနခဲ့ရၿပီး အေနနီးကပ္ခဲ့တဲ့ခ်ိန္ အမစိတ္ေလးေတြအမ်ားႀကီးသိခဲ့ရတယ္။ ႐ူပါတို႔ အားလုံးအိပ္ေနခ်ိန္ မနက္ေလးနာရီဆို အမကႏိုးၿပီးလို႔ ရွိသမွ် ပဌာန္း မဟာသမယသုတ္ ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ အကုန္ရွီခိုးပီးသြားၿပီ။ တစ္ေန႔လုံးပုတီးေလးစိတ္ပီး ဘယ္အရာေပၚမွ သူမေကာင္းျမင္ျခင္း၊ ၿငီးျငဴျခင္း၊ တစိုးတစိမွမရွိ။ သူေရာက္ေနတဲ့ေနရာမွာ သူအဆင္မေျပလဲ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ၿငီးျငဴေနတာ၊ ၿငိဳျငင္ေနတာမ်ိဳးမရွိခဲ့ဘူး။ ဘယ္သူ႔အေၾကာင္းကိုမွလဲ သူ႔ႏႈတ္ကေန ထြက္ေလ့မရွိ။ သူမသိတာဆိုလဲ အူဝဲမသိဖူးဆိုတာေလးနဲ႔ ဘယ္လိုေတာင္ျဖဴစင္မွန္းမသိေသာ ကေလးတေယာက္လို။ သားသမီးနဲ႔ပက္သက္လာရင္ေတာ့ ရင္ထဲမွာဟန္မေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ပဲ ငိုေႂကြးတတ္တယ္။ မွတ္မွတ္ရရ … Read more
အကျဥ◌်းကျနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သူ့အမြင်ကို ထုတ်ပြောလာလို့ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ အောင်ရဲလင်း
ဖမ်ဆီ ထောင်ချခံလိုက်ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့အမြင်ကို ပြတ်ပြတ်သားသားပြောလာတဲ့ အောင်ရဲလင်း ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အနုပညာလောကမှာ အမျိုးသမီးအများစုကြိုက်တဲ့မင်းသားအဖြစ်နဲ့သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲလင်းဟာလဲ အောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်ပါနော် သူ့ရုပ်ပုံနဲ့ စတစ်ကာလေးတွေထုပ်ကြော်ငြာရင်း အခြားကြော်ငြာကဏ္ဍတွေမှာလဲ လိုက်ပြီးရိုက်နေပါတယ် သူဟာ ဆန္ဒထု◌တ်ဖော်တာတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး အာဏာသိမ်းပြီးထဲက ဖေ့ဘွတ်ကနေပျောက်သွားပြီး ig မှာသွားနေခဲ့ပါတယ် သူ့ရဲ့igမှာတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောင်မလေးတွေနဲ့ တွဲလိုက်ပြတ်လိုက် ဖီးလိုက် ဘီယာလေးချလိုက်နဲ့ အလုပ်များနေခဲ့တာပါ ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေ speak out မလုပ်တာတွေကြောင့် အားမပေးတော့ရင်လဲ သူ့ကိုအားပေးတဲ့လူရှိရင် တယောက်ထဲရှိနေပါစေ အဲ့ဒီတယောက်နဲ့ပဲ အဆင်ပြေအောင်နေမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါသေးတယ် စကစမှ အာ.ဏာသိမ်.ပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်သူတွေ ဒက္ခရောက်နေချိန်အထိ ချစ်သူရည်းစားတွေ ထည်လဲတဲဲပီး အသဲကွဲလိုက် ဘီယာဘားသွားလိုက်နဲ့အချိန်ကုန်နေခဲ့တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို ခံခဲ့ရသူလဲဖစ်ပါတယ် အခုတခါမှာတော့ သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲလင်း ဟာဆိုရင် အလုပ်နဲ့ထောင်ဒ.ဏ်ကျခဲ့ခဲ့ရတဲ့ … Read more